Makanzuru Oisira Hurumende Zvipikiri Munzeve
Makanzuru emumaguta nemadhorobha aramba kutambira komekedzo yehurumende yekuti maProvincial Development Co-ordinators pamwe nemaDistrict Development Co-ordinators apinde mumisangano yese yemakanzuru nekuti makunzuru aya haasi kutevedza bumbiro remitemo yenyika pamwe nekusaterera hurumende.
Danho ratorwa nemakanzuru aya rinotevera matsamba akanyorerwa mameya nemakanzuru emumaguta negurukota rezvematunhu, VaJuly Moyo, vachiti vanoona nezvekurongwa kwemabasa mumatunhu ava vanofanira kupinda mumisangano yese yemakanzuru nechikonzero chekuti makanzuru ari kutyora bumbiro remitemo yenyika pamwe nekusaterera hurumende.
Asi sachigaro veUrban Councils Association of Zimbabwe, zvakare vari meya veGweru, VaJosiah Makombe, vati vakazeya tsamba yaVaMoyo vakaona kuti yainge iri kunze kwemutemo uye kuti yaipinza maguta nemadhorobha ese musaga rimwe chete asi iwo achishanda zvakasiyana.
VaMakombe vati vamiriria mhinduro kubva kunaVaMoyo.
Meya veMasvingo, VaCollins Maboke, vati kanzuru haisati yatanga kutevedza rairo yaVaMoyo sezvo iri kunze kwemutemo.
Vatiwo kanzuru yavo ichanyorera kuhurumende ichitsanangura kuti sei isingakwanise kutevedza komekedzo yaVaMoyo
Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari vemuHarare, reHarare Residents Trust, VaPrecious Shumba, vati kuti zviri pachena kuti VaMoyo vari kuita zvavanoda nekuti mutemo weUrban Councils Act unovapa simba rekuita izvi.
Vati mutemo uyu unopesana nebumbiro remitemo yenyika.
VaShumba vati makakatanwa pakati pehurumende nemakanzuru anogona kupera kana pakave nehurumende dzematunhu sezvakatarwa mubumbiro remitemo yenyika.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna VaMoyo kana mutevedzeri wavo, Amai Marian Chombo, kuti vachaita sei nedanho ratorwa nemakunzuru sezvo nharembozha dzavo dzange dzisiri kubatika.
MuZimbabwe mune maguta nemadhorobha makumi matatu nemaviri.